DAAWO:-Xildhibaan Nuuradiin “Waraabe Hargeysa ayaan kugu dhex garaaci doonaa”+COD | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Xildhibaan Nuuradiin “Waraabe Hargeysa ayaan kugu dhex garaaci doonaa”+COD
DAAWO:-Xildhibaan Nuuradiin “Waraabe Hargeysa ayaan kugu dhex garaaci doonaa”+COD
Iyadoo dhawaan Eng Faysal Cali Waraabe uu weeraray qaar kamid ah dadka kasoo jeeda deegaanada Puntland ayaa arintaasi waxaa ka hadlay xildhibaanada golaha Deegaanka ee Laascaano.
Xildhibaan Nuuridiin oo kasoo jeeda deegaanada Puntland kana mid ah golaha deegaanka magaalada Laascaano ayaa si caro leh kaga jawaabay hadalka Eng Faysal Cali Waraabe, isaga oo ku tilmaamay ruux ka shaqeeya dhibaateynta iyo kala fogeynta shacabka.
Eng Faysal Cali Waraabe ayaa marar badan weeraray Boqor Burhaan iyo madaxda maamulka Puntland, isaga oo dhaliilo badan u jeedin jiray, waxaana xildhibaanka ka tirsan golaha deegaanka ka muuqday caro badan.
Wuxuu sheegay in Faysal Cali Waraabe marba dhinac la safan yahay, islamarkaana aan lagu kalsoonaan karin taageeradiisa, wuxuu sidoo kale sheegay inuu yahay ruux basaasnimo ku shaqeyn jiray xiligii dowladii dhexe, sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu kaga digay Guddoomiyaha xisbiga Ucid inuu joojiyo hadalada naceybka badan dhalin kara.
Previous articleUK oo Safiir cusub u soo magacawday Soomaaliya
Next article” Ma oggolaan doonno in dalka la bur-buriyo”
DAAWO:- Banaanbax Lagu Taageerayo Sheekh Shaakir oo dhuusamareeb kadhacay